Ukukhangisa Okukhokhelwayo Nokuboniswa | Martech Zone
Ekhokhelwe futhi ibonise imikhiqizo yokukhangisa, izixazululo, amathuluzi, izinsizakalo, amasu, nemikhuba engcono kakhulu yamabhizinisi evela kubabhali be Martech Zone.
Ukuntuleka Kokudalulwa kuka-Angi Roofing kanye Nokungqubuzana Kwezithakazelo Kufanele Kudonse Ukunakwa Okuthile
NgoMsombuluko, Juni 20, 2022 NgoMsombuluko, Juni 20, 2022 Douglas Karr
Abafundi bokushicilele kwami ​​mhlawumbe bayaqaphela ukuthi sisize izinkampani eziningi ezifulelayo ukuba zakhe ubukhona bazo ku-inthanethi, zikhulise ukusesha kwazo kwendawo, futhi ziqhubekisele phambili amabhizinisi azo. Ungase futhi ukhumbule ukuthi u-Angi (owayekade engu-Angie's List) wayeyiklayenti elibalulekile esabasiza ngokwenza injini yokusesha ithuthuke ngokwesifunda. Ngaleso sikhathi, ukugxilwa kwebhizinisi kwakuwukushayela abathengi ukuthi basebenzise isistimu yabo ukuze babike, babuyekeze, noma bathole amasevisi. Nganginenhlonipho emangalisayo ngebhizinisi
Ikhampasi: Amathuluzi Okunika amandla Okuthengisa Okuthengisa Izinsizakalo Zokumaketha ze-Pay Per Click
NgoLwesine, Juni 16, 2022 NgoLwesine, Juni 16, 2022 UDaniel Alvarado
Emhlabeni wokumaketha kwedijithali, amathuluzi okuvumela ukuthengisa abalulekile ukuze ama-ejensi anikeze abasebenzi izinsiza ezidingekayo ukuze baveze imikhiqizo yamakhasimende ngempumelelo. Ngokungamangalisi, lezi zinhlobo zezinsizakalo zidingeka kakhulu. Uma iklanywe futhi isetshenziswa ngendlela efanele, inganikeza ama-ejensi okukhangisa kwedijithali ngamathuluzi adingekayo ukuze alethe okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, okufanelekile kwabafuna ukuthenga. Amathuluzi okunika amandla ukuthengisa abalulekile ekusizeni ama-ejensi alawule futhi aqondise umjikelezo wokuthengisa. Ngaphandle kwabo, kulula
Indlela Yokwakha Ibhrendi Eyiqiniso
NgoMsombuluko, Juni 13, 2022 NgoLwesibili, ngoJuni 14, i-2022 Jonathan Low
Izingqwele ezihamba phambili zezentengiso emhlabeni zikuveza ngezindlela ezahlukene, kodwa bonke bayavuma ukuthi imakethe yamanje isivuthwe ngemibono, izehlakalo, nezindaba zempumelelo ezigxile ezinkampanini zabantu. Amagama abalulekile kule makethe ekhulayo awokumaketha okuyiqiniso nemikhiqizo yabantu. IGenerations Different: One Voice Philip Kotler, omunye wamadoda amakhulu amakhulu kwezokukhangisa, ubiza into eyaziwa ngokuthi Marketing 3.0. Encwadini yakhe enegama elifanayo, ubhekisela kubaphathi bezentengiso nabaxhumani abane “